Kulan looga hadlayay amniga oo lagu qabtay Xudur | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Kulan looga hadlayay amniga oo lagu qabtay Xudur
Kulan looga hadlayay amniga oo lagu qabtay Xudur
Xudur(SONNA)–Kulan oo looga hadlayay Amaanka iyo xasiloonida Gobolka Bakool ee koonfurta Soomaaliya kana mid ah deegaanada hoose yimaada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa lagu qabtay Magaalada Xudur ee Xaruunta Gobolka Bakool.
Shirkaan ayaa waxaa soo agaasimay maamulka degmada, waxaana goobj oog ka ahaa Ma’suuliyiinta degmada,Saraakiisha Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya, ayaa waxaa Xoogga lagu saaray Iskaashiga Amaanka Xudur iyo guudahaanba xaaladda Gobolka Bakool.
Wariyaha Warbaahinta Qaranka ee Gobolka Bakool Maxamed Xasan C/raxmaan ayaa soo sheegaaya in kulanku inta uu socday laysku waydarsada xogo ku saabsan in la iska kaashado Amaanka iyo horumarinta Gobolka.
Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya ayaa Gobolka Bakool waxaa ay ka wadaan guluf dagaal oo maleeshiyaadka Nabad diidka Al-shabaab looga saarayo deegaanada ay kaga harsan yihiin Gobolkaasi, iyadoo ay jirto in maleeshiyaadku ay jareen Waddooyinka soo gala Magaalada Xudur ee Xaruunta Gobolka Bakool, si ay u dhibaateeyaan Shacbiga ku dhaqan Deegaanadaasi.
Previous articleMaamulka gobolka Bakool oo mamnuucay in qaad laga dejiyo Xudur:DHAGEYSO
Next articleCiidanka Xoogga Dalka oo deegaanno kala wareegay Al-shabaab, dad shacab ahna kasoo furtay